Semalt na-atụ aro Ngwaọrụ Weebụ Weebụ Weebụ iji wepụ Data Online
Ụfọdụ ọrụ ntanetị weebụ bụ ndị a ma ama n'etiti ndị ọrụ n'ihi mmịpụta ihe omimi ha dị egwu nhọrọ, atụmatụ, na ihe onwunwe, ebe ọrụ ndị ọzọ dị mma maka ihe ọ bụla. Ọrụ ntanetị weebụ anyị kwurula ebe a adịghị mgbagwoju anya, ha nwere ike nyochaa ọtụtụ saịtị na blọọgụ. Ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ ihe omume nchịkọta, mana ndị na-esonụ bụ freeware na ga-emezu ihe azụmahịa gị chọrọ.
1. Import - ðºñðµñð»ð¾ ð±ðµñðºð°ñðºð°ñð½ð¾ðµ.io
Import.io bụ ọrụ ike nchịkọta weebụ nke dị ike na-esote usoro dị mfe iji wepu data. Nke a nwere ike ịmepụta dataseti onwe gị ma bubata data site n'otu ibe weebụ gaa na nke ọzọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchekwa data achọrọ na diski ike gị, na Import.io adịghị mkpa koodu ọ bụla iji kpochapụ ọtụtụ ibe weebụ.
2. Epeepe Igbe
Ekepụtara Igbe dị iche iche maka ọrụ SEO ma nye ụlọ ọrụ na freelancers na ọrụ nchịkọta data kasị mma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ngwaọrụ SEO na ihe nchịkọta data. Tụkwasị na nke ahụ, Scrape Box nwere ike ịrụ ọrụ ndị na-arụ ọrụ n'ịchọgharị nyocha, ikwu okwu, nyocha njikọ, nyocha ọchụchọ na na SEO.
CloudScrape bụ ihe ntanetị weebụ na ntanetị na ntanetị ntanetị nke na-enyere aka ịchọta ọtụtụ data n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ na-enye anyị ụlọ ọrụ nke ịchekwa data na ebe nchekwa nchekwa igwe dị iche iche dịka Igbe..net na Google mbanye. I nwekwara ike idebe data gị n'ụdị CSV na JSON. Ọ bụ otu n'ime ọrụ nchịkwa nke igwe ojii kachasị ike na nke zuru oke na ịntanetị nke na-enyere aka ịnyagharị na saịtị, jupụta n'ụdị, na-arụpụta ígwè ọrụ na-ewepụta data oge.
TheWebminer bụ usoro a na-ahụ maka nchịkọta data n'ịntanetị ma na-eje ozi dịka njikwa aka na ịgbagha ọrụ. Site na oge data na saịtị, ngwá ọrụ a na-enye gị ozi ziri ezi kwa ụbọchị na ụdị ọkwa dị iche iche. Ọ na-ehichapụ data ahụ site na iwepụ ihe odide abụọ na ọdịnaya na-adịghị mkpa, na-enye gị ihe kachasị mma.
Mozenda bụ ọrụ ntanetị na ebe nrụọrụ weebụ na-arụ ọrụ ntanetị. Ọ bụ nke a nabatara site na ụdị dị iche iche na-abịa na ụlọ elu dị elu nke igwe ojii, na-enyefe nkesa ngwa ngwa, na-enwewanye nchekwube ma dị mfe ịnweta ọtụtụ ụdị data. Ị nwere ike ịhazi faịlụ gị ma bupụ ha na ụdị usoro dị iche iche na-eji Mozenda. A maara usoro a maka ịkwado ya nke ọma ma ọ chọghị nyocha.
6. Web Web Ripper
Ihe Ntanetị Web View bụ ngwọta nkwụsị nke nchịkọta weebụ weghaara, nchịkọta ọdịnaya, na nchịkọta weebụ. Ọ bụ otu n'ime ndị nchịkọta data weebụ kachasị ike na ịntanetị. Ngwaọrụ na-anakọta data na ederede na ụdị oyiyi. Ọ na-edoziri data dabere na ihe ị chọrọ na ntinye ndị bara uru na ndị bara uru.
WebHose, nke a na-akpọ Webhose.io, bụ ihe a ma ama na nchịkọta weebụ na ntinye mwepụ nke na-enye ohere dị mfe iji nweta oge data na nke ọma. Ị nwere ike ịdọrọ ọtụtụ puku saịtị yana ihe onwunwe n'ịntanetị ma chekwaa ihe ikpeazụ n'ime ihe karịrị narị asụsụ abụọ. Ọ na-enyere gị aka ikpuchi ọtụtụ nnọkọ, nchịkọta akụkọ, blọọgụ, na ụlọ ahịa na-ere ntanetị.